SEO Link Juice avy amin'ny YouTube
Zoma, Martsa 4, 2011 Saturday, May 11, 2013 Nick carter
Nahita fahombiazana be dia be aho tamin'ny fampiasana Youtube mba hanamafisana ny maha-zava-dehibe ny pejy fandraisana ho an'ny teny lakile manokana. Dingana tsotra izao ary izao no fandehany:
Mamorona pejy fitobiana izay misy ny teny lakileo ao anaty URL, sarahina hyphen. Manampy ny botika ity hijerena ny teny amin'ny fomba hafa ary hanaiky ny maha-zava-dehibe anao amin'ny andianteny kendrenao. Ho an'ity ohatra ity dia hampiasa aho http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
Mamorona horonan-tsary hapetrakao amin'ity pejy ity. Raha ny fijerin'ny SEO dia tsy maninona mihitsy ny atin'ny horonantsary satria fantatsika rehetra fa tsy afaka mandady video ny bot. Saingy, amin'ny fomba fijerin'ny olombelona, ​​alao antoka fa tena misy ifandraisany tokoa ilay horonantsary. Rehefa dinihina tokoa, ity no pejy izay handehananay fifamoivoizana.
Ampidiro ao anaty Youtube ilay horonan-tsary ary ampiasao ny teny fanalahidy na fehezanteninao ho lohatenin'ilay video. Ohatra, mitondra ny lohateny hoe, "Small Business CRM" ny lahatsariko.
Farany, ampidiro ny rohinao (http: // tafiditra) ao amin'ny famaritana ny horonan-tsary.
Rehefa mamoaka ity horonantsary ity ny Youtube, misy rohy hita izay mifanaraka amin'ny fomban'ny URL iray, manomboka amin'ny HTTP, dia averina averina ao amin'ny URL avy hatrany. Eto no zava-dehibe ny URL an'ny pejy fandraisana satria tsy hainao ny manamboatra ny vatofantsika, ny Youtube dia mampifandray ny adiresy fotsiny. Ka, manana ny fehezanteny manan-danja ao amin'ny URL miantoka fa ny vatofantsiky ny vatofantsinao dia misy ny teny lakilinao kinendry. Ohatra, jereo ny URL misy rohibe ao ity pejy horonantsary Youtube ity.
Saingy tsy rohy tsy anarahana ve ity? Mazava ho azy fa. Ny marika vatofantsika izay nofonosin'i Youtube amin'ny URL anao dia homena toetran'ny rel = ”tsy fanarahana”. Hevero hoe: iza no miraharaha! Na eo aza ny lazain'ny fenitra w3 fa tsy tokony hanarahana ny tag tsy mpanaraka dia naseho ahy matetika ny angon-drakitra manan-tantara fa ireo rohy heverina ho tsy narahina ireo dia manampy amin'ny fampivoarana ny maha-zava-dehibe ny URL kendrena. Na dia tsy mahomby kokoa noho ny rohy anatiny aza dia mandaitra.
Ankoatr'izay, ny tag H1 amin'ity pejy ity, ny lohateny, dia misy ny teny lakileo. Noho izany, manana pejy iray izay misy ifandraisany amin'ny fehezanteny manan-danja ianao mampifandray ny pejinao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra vatofantsika fenoina fehezanteny fototrao. Mora izany!
Farany, fa tsy izay ihany, ny fametrahana ity horonantsary ity amin'ny pejy fiantsonana izay ifamatorany ankehitriny dia dingana farany lehibe. Ity horonan-tsary natsofoka ity dia milaza amin'ny bot Google fa ny atin'ny pejy dia tena misy ifandraisany amin'ny teny fanalahidy irina. Fa maninona Satria ny lohatenin'ilay horonan-tsary mirakitra dia ahitana ny teny fototra kendren'ity pejy ity. Na dia tsy mandady aza ireo zavatra tselatra natsofoka, dia matoky aho fa ny bot Google dia manaiky ny zavatra Youtube ary manome ny lohatenin'ilay horonantsary ao amin'ny algorithm.
Ny eritreritro momba ny fanovana ny Algorithma “Panda” an'i Google
Mar 6, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Hanao tolo-kevitra iray aho - apetrakao alohan'ny atiny ny rohinao fa tsy ao anatiny. Betsaka ny olona tsy manitatra sy mamaky ny fidirana famaritana YouTube iray manontolo. Ho hitanao fa hampiakatra ny tahan'ny tsindrio ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana rohy voalohany.
Aug 8, 2011 amin'ny 10: 01 AM
Oay! Tsara izany! Tsy nahalala an'izany! Saingy, manana fanontaniana aho: raha mametraka rohy mankany amin'ny tranokalanao ianao rehefa avy manome hevitra amin'ny horonan-tsary, mety ho ratsy amin'ny orinasanao ve izany? Ny tiako holazaina dia ny hoe hanasazy ny tranokalako ve ny google? raha tsy izany dia mety hitranga zavatra ratsy ve?
Mar 7, 2011 amin'ny 2: 24 AM
Nanomboka nanao izany aho iray volana lasa izay ary nahazo valiny tena tsara ho an'ny tenako ihany fa ho an'ny mpanjifa maromaro ihany koa. misaotra anao namoaka ny tsiambarateloko tao anaty kitapo. TPT.
Mar 7, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
Zavatra iray hafa tokony hatao dia ny mandika ny atiny video anao. Izany dia hanome azy fotoana tsara kokoa ho hita ao anatin'ny fikarohana ao amin'ny YouTube ihany koa. Nisy namako nanome ahy ny lohako http://speakertext.com izay serivisy izay miasa betsaka amin'ny asa ho anao. Azoko antoka fa azonao atao ny mampiditra ny lahatsoratra voasoratra ao amin'ny pejy fiakarana ary manafina azy tsy ho hitan'ny besinimaro nefa mbola manampy ny laharam-pejyo. Fampahalalana sy torohevitra tsara amin'ny fanatsarana ny atiny video fa tsy ny fametrahana azy fotsiny.
Fampahalalana mahafinaritra. Betsaka ny olona no tsy mahatakatra ny fomba hanampian'ny horonantsary titling azy ireo. Jereo ihany koa ny fandikana azy ireo amin'ny serivisy toy ny Speaker Text. Io dia ahafahanao mandefa transcription ao amin'ny YouTube izay manamora ny fitadiavana ny atiny video ao amin'ny YouTube. Azonao atao angamba ny mandray ilay lahatsoratra ary mametraka azy ao amin'ny pejy fiandrasana anao saingy manafina azy tsy ho hitan'ny masonao koa.
May 7, 2011 ao amin'ny 3: 30 PM
Misaotra tamin'ity lahatsoratra mampahalala ity. Ny fanontaniako ihany dia ny hoe, maninona no averina averina amin'ny pejy fiantsonana ny atiny video? Efa hitan'ny vahoaka tao amin'ny YouTube izany, maninona raha manana atiny hafa mifandraika amin'izay mifanaraka amin'ny teny fototra? Tsy hahomby ve izany raha tsy betsaka?
May 7, 2011 ao amin'ny 4: 58 PM
Fanontaniana lehibe. Misy fomba roa ahitan'ny mpijery ilay horonantsary - iray
midika hoe amin'ny alàlan'ny fikarohana amin'ny sehatra fampiantranoana video toa ny YouTube,
na amin'ny alàlan'ny olona miresaka momba ilay video ao amin'ny YouTube. Na izany aza, fametrahana ny
horonan-tsary ao amin'ny tranokalanao dia hanatsara izany pejy izany amin'ny motera fikarohana ary hiseho
ao amin'ny bara horonan-tsary izay aseho tsy voatery amin'ny valin'ny fikarohana. Araka ny
eny, raha manana tambajotra sosialy sy PR tsara ianao - mandefa ilay horonantsary
Ny atiny ao amin'ny pejinao dia afaka mahasarika fifamoivoizana. Farany,
naseho tamina fitsapana maro azon'ny horonan-tsary teo amin'ny pejy fandraisana
mampitombo ny tahan'ny fiovam-po. Manaiky anao aho amin'ny lafiny iray -
alao antoka fa mifandraika amin'ny atiny ilay horonan-tsary eo amin'ny pejinao
Ery. Fanatsarana tsara izany!
Diaben'ny Distrikan'ny Farihy
May 22, 2011 amin'ny 10: 52 AM
Mila milaza aho fa ny lahatsoratra etsy ambony no endrika tsara indrindra sy matihanina novakiako androany ary efa namaky vitsivitsy tao amin'ny rohy hyperlink You Tube aho. Ny fifandraisana misy eo amin'ilay motera fikarohana video voalohany sy ny pejin-tranonkala tompona vao nampiroborobo dia lehibe ary mahalana no raisin'ny "tranokala SEO" hafa ary mieritreritra aho fa tena mifandraika izany ary famaranana lojika tsara amin'ny paikadiko marketing. Misaotra.
Mar 28, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Tena tsimoka tsara ity.
Jun 10, 2012 ao amin'ny 7: 00 PM
Lahatsoratra tsara raha mampifandray amin'ny youtube, ity ho an'ity toro-hevitra seo ity
17 Nov 2014 amin'ny 9:32 maraina
Torohevitra mahaliana sy fisaorana tamin'ny fizarana. Miaraka amin'ny fifehezan'i Google ny ankamaroan'ny karoka izay mitranga amin'ny Internet, ny fananana atiny sy rohy vitsivitsy amin'ny sehatra samihafa dia fomba azo antoka hahasoa ny webmaster na bilaogera rehetra. Ary amin'ny fivezivezena goavambe izay andidian'ny YouTube isan'andro amin'ny Internet, tsy misy toerana tsara kokoa hanararaotana an'izany amin'ny fivezivezena.
12 Jan 2015 amin'ny 11:09 PM
Lahatsoratra tsara, tiavo ny atiny. Nanontany tena aho hoe inona ny lohahevitra ampiasainao, tiako ny sidebar dissapearing. Alefaso azafady ny rohy ifandraisanao amiko raha azonao izany, te hahazo ny maodely sy ny plugin
13 Jan 2015 amin'ny 3:38 PM
Mampiasa ny Superfly Responsive WordPress Menu Plugin azo alaina avy any Codecanyon. Ny lohahevitra dia lohahevitra namboarina namboarina izay mbola namboarinay.
22 Jun 2015 amin'ny 5:43 AM
Mampalahelo fa mila maka horonan-tsary natao ianao hanaovana an'ity izay lafo kokoa noho ny dokam-barotra fotsiny.
Jun 22, 2015 ao amin'ny 10: 45 PM
Afaka mampakatra horonantsary maimaimpoana avy amin'ny iPhone-ko aho! Tsy misy?
Fivarotana E-Liquid UK
Jun 26, 2015 ao amin'ny 9: 50 PM
Tsy mbola nandre momba an'i Fiverr ve ianao?
Lahatsoratra tsara, rahateo, loharano mahafinaritra ho an'ny rohy sy fanentanana ny YouTube.
Dec 29, 2015 ao amin'ny 5: PM PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Tena mila manamarina izany aho.